Dadweynaha Göteborg oo lugu booriyey ineey biyaha tubadda iska kar kariyaan | Somaliska
Degmooyinka qaar ee ku yaala magaaladda Göteborg, ayaa dadweynaha waxaa looga digay ineey iska kar kariyaan ka hor inteeysan ka cabin, ka dib markii habeen hore ay dilaaceen dhuumihii biyaha ee xaafadahaasi oo ay fatahaadeen.
Wakaaladda biyaha u soo gudbisa deeganadaas oo ay ku taala tuuladda Aleyckan ee duleedka magaaladda Göteborg ayaa sabab u noqotay fatahaada biyahaas ka dib markii ay jabtay.
“Waxeey qaadaneeysa dhowr maalmood inta aan hagaajineyno, mana jirto haaatan calaamud muujineysa ineey abuuri karaan xaalad caafimaad darro, balse ammaanka awgiis waxaan dadka kula talineeynaa ineey iska kar kariyaan biyaha ka hor inteeysan cabin” ayey tiri Anne Lundgren oo ah dhinaca isku xirka u qaabilsan gobolka Göteborg.
Habeenimaddii talaaddda soo galeeysay ayaa qaar kamid ah xaafadda Göteborg, waxaa ku dhacay biyo la’aan, biyahan oo saacado maqnaa ayaa goor dambe oo isla habeenimadaas ah dib u soo laabteen. Xaafadaha ay ka mid yihiin waqooyiga Hisingen, Angered iyo Örgryte-Härlanda ayaa waxaa si weyn u saameeyey biyo la’aanta ka dib dhaawaca soo gaaray dhuumaha biyaha u soo gudbin jiray. Balse dadka degan xaafadaha ku yaala Göteborg ee Eriksbo, Bergsjön, Gunnilse iyo Bergum, ayaa ammaanka lugu booriyey ineey biyaha kar kariyaan. Waxaa sidoo kale lugu booriyey ineey biyaha xafidaaan oo aysan ku dheelin.
Dhinaca kale gobolka Göteborg, ayaa xaafadaha qaar waxaa ay dhigeen u sameeyeen goobo tubooyin ah oo biyaha laga cabo. Waxaa ka mid ah Rymdtorget oo Bergsjön iyo suuqa Kortedala Torg. Qasabadan ama tubaddan jabtay ayaa meelo badan oo magaaladda Göteborg waxaa laga dareemay dhaawaca ay u keentay. Waxaa sidoo kale ay saameyn ku yeelatay biyaha kulul iyo kuleelisadda loo yaqaano hiiter-ka. Waxaana maamulka gobolka iyo waakaladda biyahaba ay sheegeen ineey maalmo qaadaneeyso in wax walba dabiici ku soo laabtaan.
Qilaafka meherka oo gaaray maxkamadaha Sweden
Xalinta qilaafaadka lacagta iyo qoyska Soomaaliyeed
Waa sidee nolosha magaalada Jönköping